Bhenefiti uye kufunga kubva kuvasikana vanotamba muchikoro chepuraimari - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Zvakanakira uye kufunga kubva kuvasikana vanotamba kuchikoro chepuraimari
Vabereki vazhinji vanokumbira vana vavo kuti vadzidze ballet, saka inguvai yakanaka yekutanga? Ndeapi matambudziko ekuteerera? Hezvino tarisiro paFitdance Ballet Factory:
Zvakanakira kudzidza ballet
1, yekukura kwefupa remwana, chimiro chakanaka
2, inogona kugadzirisa chimiro chakaipa chemwana uye fomu, senge O - gumbo, mukati mehunhu, hunchback, nezvimwe
3, inogona kuumba tsika yakanaka yehupenyu, inogona zvakare kubatsira kukura kwehungwaru
Zvirinani kuti vana vadzidze ballet kubva pamazera egumi kusvika gumi. Zvisinei, zvakafanira kumirira kusvika pamazera egumi nerimwe kusvika gumi nematatu kumwe kufamba kwakaoma kana zviitwa zvinoremedza nyama dzevanhu (senge chigunwe chebharlet), kuitira kuti isakonzere kukuvara kwemitambo kujoini nemapfupa.Mucheche anodzidza ballet, mashoma mashoma enhando mafambiro anogona kuitwa mukati memakore matatu kana zvakadaro, asi kurairirwa kwehunyanzvi kwaive nani kutanga mumakore matanhatu kana zvakadaro.
Matipi ekudzidza ballet
1. Tsvaga vanodzidzisa vanokwanisa uye vadzidzisi kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana mamiriro akakodzera kubva pakutanga.
2, tambo shangu yekutamba siketi inofanirwa kuve yehunyanzvi, yakapfava uye yakaoma inokodzera, pfeka yakura kwazvo, shangu dzakaputsika zvakanyanya kutamba tsoka dzinokuvadza nyore
4, nyatso kutevedzera kuraira kwemudzidzisi, zvisinei zera remwana, kureba kwekudzidza, tsika inofanirwa kuve nemamiriro akafanira.
5. Dzidzira kwemaminetsi gumi nemashanu pazuva pakutanga kwekosi, uye zvishoma nezvishoma wedzera kumhanya kwekosi kusvika pamaminitsi makumi matatu pazuva. Munguva yekudzidzira, tora mabhureki panguva dzakakodzera kuti usakuvara kune iro rutsoka, tsoka dzemakumbo uye tendon.
6. Kana uchirwadziwa mumabvi ako nemagumbo uchitamba, isa mazaya echando kwemaminitsi gumi usati watsvaga kurapwa.Kubvira pamakore mana kusvika gumi nemashanu, vana vanogona kudzidza ballet, asi zvinofanirwa kuitwa nenzira dzakakodzera dzekudzidzisa, kusvikira mwana ane simba rakakwana uye kugona kuenda pazvigunwe.
Yapfuura:Sei uchifanira kudzidza ballet kuti uve mutambi we ballet
Tevere:Vana vanodzidza rumwe ruzivo rwakakosha uye matanho ekudzivirira kutamba